ह्याप्पी न्यू इयर २०२० !
लण्डन । ईस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष २०२० लाई आज संसारभर भव्य रुपमा स्वागत गरिएको छ ।
बेलायतमा पनि राजधानी लण्डनसहितका विभिन्न शहरमा विशाल आतसबाजीहरुसहित नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिएको छ ।
नयाँ वर्ष सुरु हुँदै गर्दा मध्य लण्डनमा गरिएको विशेष कार्यक्रम हेर्न १ लाख भन्दा बढिमानिसहरु भेला भएका थिए । जुन कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण १२ हजारको संख्याकाआकर्षक फायरवर्क ( आतसबाजी) थिए ।
लण्डनबाहिरका अन्य शहरहरुमा पनि आतसबाजी, नाचगान, विविध सांगीतिक रमझमसहित नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिएको छ ।
यसपटक नयाँ दशक सुरुआतको समेत संयोग परेकाले नयाँ वर्षको उत्सवमा झन बढि उल्लास थपिएको छ ।
बेलायतमा बस्ने नेपालीहरुले पनि नयाँ वर्ष २०२० लाई दिल खोलेर स्वागत गरेका छन् ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा यहाँका विभिन्न शहरस्थित कैयौं नेपाली रेष्टुरेन्टहरुमा आयोजित विशेष सांगीतिक कार्यक्रमहरु स्थानीय नेपालीहरुले भरिभराउ बनेका थिए ।
बेलायतका कतिपय नेपाली संघसंस्थाले विशेष शुभकामना कार्यक्रम नै आयोजना गरेर नयाँ वर्ष मनाउने तयारी पनि गर्दैछन् ।
उडिसा राज्यमा ३० अप्रिलसम्म लकडाउन !
एजेन्सी । भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिएको छ । दैनिक ५०० भन्दा बढी संक्रमितहरु फेला पर्न थालेपछि विभिन्न राज्यले उच्च सतर्कता अपनाउन नयाँ नीति ल्याउने काम गरेका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले डेरा लिई बसेका तथा विपत्तिका बेला घर जान नपाएर डेरामै रहेका विद्यार्थीलाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले विज्ञप्ति निकालेर त्यस्ता खालक
सीजी इलेक्ट्रोनिक्सका सामग्रीहरूको वारेन्टी अवधि लम्बियो
काठमाडौँ । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले बिक्री गर्ने घरायसी सामग्रीहरूको वारेन्टी अवधि लम्बाएको छ । कम्पनीले एलजी, सीजी, गोदरेज, टीसीएल, सेन्सेई तथा अन्य घरायसी सामग्रीको वारेन्टीमा म्याद थप गरेको हो ।